भारतमा सम्पन्न मुस्लिम धार्मिक भेलामा सहभागी एक नेपालीमा कोरोना संक्रमण भएकाे पुष्टी, काे हुन उनी ? — Imandarmedia.com
१०“We are going to win”, Biden say on US Election asalead widens
११खुला मञ्‍चमा गरिबलाई खाना खुवाउन रोक लगाउने महानगरको निर्णयप्रति साझा पार्टीको विरोध
भारतमा सम्पन्न मुस्लिम धार्मिक भेलामा सहभागी एक नेपालीमा कोरोना संक्रमण भएकाे पुष्टी, काे हुन उनी ?
नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको निजामुद्दिनमा हालै सम्पन्न मुस्लिम धार्मिक भेलामा सहभागी एक नेपालीमा कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमण देखिएको छ । उक्त भेलामा सहभागी भएका पर्सा निवासी ६६ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । उनी दुई साताअघि मात्र हरियाणाको अम्बाला पुगेका थिए ।
भेलाका अन्य दश जना सहभागीसहित उनी हरियाणाको अम्बालाको महेशनगरस्थित मस्जिदमा बस्दै आएका थिए। उनीहरु दुई साताअघि बंगेलवाली मस्जिदमा भएको तबलिगी समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय भेलामा सहभागी थिए। अम्बाला पुगेका सबै नेपाली पर्सा जिल्ला रहेका छन्।
दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलांगनामा विगत केही दिनयता पहिचान भएका कोरोना संक्रमित सबैजसो तबलिगी भेलाका सहभागी भएको खुले छि भारतको गृहमन्त्रालय र मातहतका निकायले उक्त भेलाका सबै सहभागीहरुको खोजीलाई तीव्रता दिएको थियो। सुरेशराज न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचारले लेखेका छन् ।
त्यही क्रममा प्रहरीले महेशनगरको मस्जिदमा छापा मारेपछि त्यहाँ नेपाली आठ, श्रीलंकाका एक र बाँकी दुई जना भारतकै राजस्थान र आसामका नागरिक बस्दै आएको खुलेको थियो। त्यसपछि उनीहरु सबैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा पठाएको थियो।
कोरोनाको लक्षण देखिएका दुई जना नेपाली र एक श्रीलंकालीलाई भने आइसोलेसनमा राखिएको थियो। र, गत बुधबार उनीहरुको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। परीक्षणको रिपोर्ट बिहीबार साँझ आएको हो। जसमा ६६ वर्षीय नेपाली पुरुषको कोभिड–१९ भाइरस देखिएको हो।
कोरोना देखिएका उनलाई हाल अम्बाला केन्ट अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। र, उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको अम्बाला जिल्लाका प्रमुख स्वास्थ्य अधिकृत डा. कुलदिप सिंहले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए। ‘अरु कुनै समस्या नभएकाले रिपोर्ट पोजिटिभ आए पनि उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ,’ उनले भने।
परीक्षण गरिएका अर्का एक नेपालीको रिपोर्टमा भने कोरोना संक्रमण नदेखिएको डा. कुलदिप सिंहले बताए। अम्बाला पुगेका अन्य ६ जना नेपालीको भने परीक्षण हुन बाँकी छ। र, उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य छ। अम्बाला पुगेका आठै जना भेलाका सहभागी सबै जना पर्सा जिल्लाका रहेका छन्।
दुई साताअघि दिल्लीको निजामुद्दिनको बेंगलवाली मस्जिदमा रहेको मरकज –केन्द) मा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुमध्येको तबलिगी समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय भेला (जमात) आयोजना गरिएको थियो। ५ मार्चदेखि १३ मार्चसम्म चलेको उक्त भेलामा भारतीय र विदेशीगरी चार हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहेको बताइएको छ।
तिनीहरुमध्ये एक हजार पाँच सयभन्दा बढी २४ मार्चअघि नै हिँडिसके पनि देशव्यापी लकडाउनका कारण हजारभन्दा बढी त्यहीँ रोकिएका थिए। तर, भेलामा सहभागी भएकाहरुमध्ये दिल्लीका २४ जनामा कोरोना देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले त्यहाँ रहेका सबैलाई बाहिर निकालेको थियो। जसमध्ये एक हजार ८ सय जनालाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको थियो। साथै भारत सरकारले भेलाका स्वदेशी र विदेशी सबै साहभागीको खोजी सुरु गरेको थियो।
भेलामा ठ्याक्कै कति नेपाली सहभागी थिए भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन। दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भने भेलामा २० जना नेपाली सहभागी रहेको जनाएको छ। त्यसबाहेक निजामुद्दिनकै मदरसामा अध्ययनरत १३ जना विद्यार्थी भेलामा सहभागी रहेको बताइएको छ। हाल उनीहरु सबैलाई हरियाणाको नरेलामा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। र, उनीहरुमा हालसम्म कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन।
तर, अम्बालाको पछिल्लो घटनाले नेपालीहरुको संख्या धेरै हुने देखाएको छ। भारतीय सुरक्षा स्रोतले नेपालीहरुको संख्या प्रस्ट हुन अझै केही दिन लाग्ने बताएका छन्। स्रोतका अनुसार उत्तरप्रदेश र राजस्थानमा पहिचान गरिएका भेलाका सहभागीहरुमध्ये केही नेपाली नागरिक रहेका छन्। तर, तिनीहरुको प्रस्ट विवरण भने आउँन बाँकी रहेको छ। र, भेलाका नेपाली सहभागी पनि अरुसँगै भारतका विभिन्न राज्यमा पुगेको हुनसक्ने भारतीय सुरक्षा स्रोतले दाबी गरेको छ। र, अम्बालाको पछिल्लो घटनाले पनि त्यसलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्छ।
विगत केही दिनयता पुष्टि भएका कोरोना केसहरुमध्ये अधिकांशको तार निजामुद्दिन भेला जोडिएकाले नरेन्द्र मोदी सरकारका लागि कोरोना महामारी नियन्त्रण ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म पहिचान भएका २ हजार ६ सयभन्दा बढी कोरोना संक्रमितमध्ये ६४७ को सम्बन्ध त्यो भेलासँग जोडिएको दाबी गरेको छ। पछिल्लो चार दिनमा मात्र भारतमा १२ सयभन्दा बढी नयाँ केस देखिएका छन्।
त्यसमध्ये एक चौथाइको केसको तार निजामुद्दिन भेलासँग जोडिएको दाबी भारतीय अधिकारीहरुले गरेका छन्। त्यसैगरी भारतका १८ राज्यहरुमा पहिचान भएका संक्रमितहरुको सम्पर्क दिल्लीको तबलिगी जमातसँग रहेको दाबीसमेत मन्त्रालयको छ। भारतमा हालसम्म कोरोनाका संक्रमणबाट ६२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १६३ जना उपचारपछि निको भइसकेका छन्।
भारतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको गुनासो : ‘दूतावासले सामान्य चासोसमेत राखेन’
दक्षिण भारतको पोन्डीचरी विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्नातकोत्तर अध्ययनरत विभु लुइँटेललाई आफूसँगै होस्टलमा बस्ने भुटानकी एक साथीको कुरा सुनेर झट्ट त विश्वास लागेन ।
ती साथीलाई दूतावासबाट फोन आएको रहेछ। दूतावासका कर्मचारीले घर जानका लागि सामान प्याक गर्दै गर्नु र एअरपोर्टसम्म जान ट्याक्सीको व्यवस्था पनि दूतावासले नै गरिदिने जानकारी दिएछन्।
विभुलाई आफ्नै साथीको कुराले आश्चर्यमा त पार्यो नै अर्कोतर्फ निराश पनि। किन भने उनका लागि दूतावासले सम्पर्क गर्नु अनौठो कुरा थियो। नेपाल फर्काउने त टाढाको कुरा भयो। ‘अरु देशले आफ्ना नागरिकहरुका बारेमा चासो राखेको देख्दा हाम्रो दूतावासबाट त्यस्तो केही नहुँदा नरमाइलो लाग्ने रहेछ,’ विभुले कान्तिपुरसँग भनिन्।
त्यसो त उनलाई खाना बस्नको खासै समस्या भने छैन। तर, लकडाउनका कारण घर जान नपाएको त्यसमाथि कोरोनाको त्रासबीच होस्टलमा बसिरहँदा परिवारले मनोबल बढाइरहे पनि दूतावासले पनि फोन गरेर हालखबर सोधिँदा थप सान्त्वनाको काम गर्ने विभुको भनाइ छ।
विभु पढ्ने विश्वविद्यालयमा अन्य पाँच जना नेपाली विद्यार्थी पनि घर नगइ बसेका छन्। ‘बस्न असहज छैन तर, जताततै त्रासको वातावरण छ। त्यसमाथि लकडाउन कहिलेसम्म जाने भन्ने ठेगान छैन। त्यस्तो बेला राज्य र दूतावासले पनि सम्झिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दो रहेछ,’ उनले गुनासो गरिन्।
यस्तो गुनासो गर्ने विभु एक्ली होइनन्। अध्ययनका लागि हाल भारतका विभिन्न सहरमा रहेका सबैजसो नेपाली विद्यार्थीको राज्य र दूतावासप्रति त्यस्तै गुनासो छ। प्रवासी नेपाली संगठन र अन्य विद्यार्थी संगठनहरुका भनाइमा भारतका विभिन्न सहरमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्या सत्तरी हजारभन्दा बढी छ।
नेपाली विद्यार्थीहरु विशेषगरी दिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोर, चण्डीगढ, चेन्नई, हरियाणा, हरिद्वारमा बढी छन्। जसमध्ये केही लकडाउनअघि नै नेपाल फर्किसके पनि अझै पनि सयौंको संख्यामा यतै रोकिएका छन्। उनीहरु कोही होस्टलमा छन्, कोही पेइङ गेस्ट(पीजी)मा बस्छन् भने कोही कोठा भाडामा लिएर बस्ने गरेका छन्।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भारतमा लागू गरिएको लकडाउनका कारण विशेषगरी पीजी र कोठा भाडामा लिएर बस्ने नेपालीहरुलाई बढी समस्या परेको उनीहरुको भनाइ छ। लकडाउनका कारण बाहिर सामान नपाउने र पाइहाले पनि चर्को मूल्य तिर्नु पर्ने बाध्यता छ।
त्यसैगरी होस्टलमा बस्नेहरुले पनि कलेज र विश्वविद्यालयले सबै कर्मचारीलाई बिदा दिएको हुँदा आफैंले खाना पकाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले कोरोना भाइरसको महामारीबाट त्यसै पनि त्रसित रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुमा तनाव थप बढाएको छ। तर, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास भने विद्यार्थीहरुको यी चासो र गुनासोप्रति बेखबर देखिन्छ।
बहराइनमा एकैपटक ९ जना नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित
बहराइनमा एकैपटक ९ जना नेपाली कामदार कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)बाट संक्रमित भएका छन् । यसअघि बहराइनमा ३ जना नेपालीमा कोरोना देखिएको थियो ।
बहराइनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार एउटै क्याम्पमा बसेका कामदारमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो । ‘बहराइनको सल्मावादस्थित एक क्याम्पमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई कोरोना देखिएको थियो । त्यो क्याम्पमा नेपाली सहित ४ सय जना बस्दथे । सबैलाई क्याम्पमै क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो’, बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा ९ जना नेपालीलाई पोजिटिभ देखिएको हो ।’
उनीहरुको अवस्था स्थिर छ । त्यस क्याम्पमा अझै कति नेपाली छन् भन्ने खुलेको छैन । बहराइनको स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुसार शुक्रबारसम्म १२ नेपाली सहित २ सय ८६ जनाको उपचार भइरहेको छ । ३ सय ८२ जना भने निको भएर अस्पतालबाट घर वा क्याम्प फर्किसकेका छन् । ४ जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म ३७ हजार ९ सय ९६ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेको छ।
राजदूत सुन्दासले बहराइनमा उपचार भएर घर फर्किनेको संख्या खाडीमा सबैभन्दा बढी रहेको बताए । उनले बहराइनले संक्रमण नियन्त्रणलाई उल्लंघन गर्नेलाई तीन महिना जेल र एकदेखि १० हजार दिनार जरिवाना तोकिएको भन्दै सचेत रहन नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र श्वास फेर्न गार्‍हो भएमा तुरुन्त ४४४ मा फोन गर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ ।
चाबीको भरमा मोटरसाइकल छोड्दा चोरीको दर बढ्दै, हराएको अनुपातमा भेट्टाउने कम
पार्टी फुटाउनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो